Harry Lillis Crosby ( Tacoma, United States, 3 maypole ose 1903 - Alcobendas, Spain, 14 October kubva 1977 ), nani aizivikanwa Bing Crosby aiva muimbi ( crooner ) uye Actor American aine basa zvakatevedzana hafu yezana remakore vaiona Yekutanga multimedia nyeredzi, Bing Crosby ndiye ainyanya kutengesa uye akabudirira zvikuru mimhanzi chiitiko chemakumi maviri emakore.
Crosby aive mutungamiri mukutengesa kutengesa, mareti zviyero, uye mari yakawandisa yemuvhi - mumwe wevanonyanya kukosha uye vane pesvedzero mavara emuzana ramakore rechi 20 pasi rose. Iye aive mumwe wevokutanga midhiya maartistadist.
Pakati pa1954 na1954, Crosby aive nemubhadharo aisamirira pamwe nemaalbum ake, ratings dzakakura pazviteshi zveredhiyo nemafirimu ane mukurumbira nyika.1 Anowanzoonekwa semumwe wevatambi vekuimba vane mukurumbira munhoroondo uye nhasi uno Zvakawanda zvakanyorwa nezwi remunhu zvemunhu.2 Kukudzwa kwehunyanzvi kwaCrosby kuri kwepasirese, zvakakosha kuti titaure kuti aive mumwe wekurudziro huru kune vamwe vatambi vakuru vechirume vaimutsigira, saFrank Sinatra, Perry Como, Dean Martin, John Lennon , Elvis Presley, Michael Bublé kudoma vashoma.
Bing Crosby atengesa anopfuura bhiriyoni imwe rekodhi pasi rese kusvika nhasi3 4 pamwe rekodhi inotengesa yakakura kwazvo munhoroondo, pamwe nerwiyo rwuri kutengeswa zvakanyanya pasi rose rakanzi White Christmas, nemakopi anopfuura zviuru makumi mashanu ezviuru zvinotengeswa pasi rose
Crosby aive akakurumbira uye aive akakurumbira mukati mezana ramakore re 20 munyika zvekuti ongororo yakaitwa kare ikaburitsa kuti Crosby aive akakurumbira uye airemekedzwa kupfuura Papa Pius XII panguva iyoyo.
Kubudirira kwake kweshodhi kunoramba kuchishamisa: Makadhi 396 emunhu mumwe chete, kusanganisira 41 Nhamba 1 hits. Beatles naElvis Presley vakasanganiswa.
Crosby aive akapatsanurwa chati rimwe pagore gore ra19311 na1954, uyezve aive nemakumi maviri nematanhatu mhemberero dzakakurumbira muna 1939 chete.
Bing Crosby akarekodha zvinopfuura zviuru zviviri ezvekutengeswa pamwe neredhiyo zviuru zvina, pamwe neruzhinji runyorwa rwemafirimu ne terevhizheni kuratidzwa, ndiye anonyanya kurekodwa muartist.
Bing Crosby akahodha 41 No 1 marekodhi pamateki (43 kusanganisira yechipiri neyechitatu misoro ye "White Kisimusi"), kupfuura The Beatles ine (24) naElvis Presley ine (18) marekodhi.
Zvinyorwa zvake zvakasvika pamatsitsi 396 nguva, kupfuura Frank Sinatra (209) naElvis Presley (149) zvakasanganiswa.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Bing_Crosby&oldid=90867"
This page was last edited on 21 Ndira 2022, at 01:28.